2021 PVC ရာဘာတံဆိပ် Machine Machine Mero Weldo လက်ဝတ်ရတနာကြွေစက်ပစ္စည်းပေးသွင်း
ရာဘာ Label အလိုအလျောက်ပြုလုပ်ခြင်းစက်
Desktop Soft PVC တံဆိပ်စက်
ဒေါင်လိုက် PVC တံဆိပ်ကပ်စက်
အသိဉာဏ်အမြင်အာရုံကြည်လင် setting ကိုစက်
အဘယ်ကြောင့် weldo ရွေးချယ်?
အသိဉာဏ်အမြင်အာရုံစိန် settinging စက်
TPR မှရော်ဘာ Patch ထုတ်လုပ်မှု
ရော်ဘာ Coaster ပြုလုပ်ခြင်းစက်
အသိဉာဏ်အမြင်အာရုံကြွေစက် | အရောင်းမြှင့်တင်ရေးလက်ဆောင်ပစ္စည်း
ရှင်းလင်းသော Crystal Doming Machine
Mosaic Doming Sticker အလိုအလျောက်စက်
epoxy စတစ်ကာ | Pu LabeL Doming စက်
အဝတ်အထည် Hang Doming Machine
ခလုတ်များအတွက် epoxy doming စက်
ရှင်းလင်းသော epoxy အပေါ်ယံပိုင်းမြှင့်တင်ရေးမြှင့်တင်ရေး keychain | ဒင်္ဂါးပြား
စမတ်ထုတ်လုပ်မှုကို WElDO မှစတင်သည်
ဆယ်စုနှစ်များစွာစက်မှုလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံများစွာရှိသော WELDO သည်အလိုအလျောက်ထုတ်ပေးသည့်စက်များနှင့်အရောင်စက်များကိုအဓိကထားသည်။ ၎င်းသည် ISO9001 အရည်အသွေးစံသတ်မှတ်ချက်ကိုကျော်လွန်ပြီးလွတ်လပ်သောအသိဥာဏ်မူပိုင်ခွင့်မူပိုင်ခွင့်နှင့်ဆော့ဖ်ဝဲမူပိုင်ခွင့်များစွာရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်နှစ်ဆပျော့ပျောင်းသောစီးပွားရေးအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ကိုရရှိပြီးဖြစ်သည်။ လက်ရှိနည်းပညာနှင့်ရောင်းအားသည်ကမ္ဘာ့စက်မှုလုပ်ငန်း ဦး ဆောင်အဆင့်သို့ရောက်ရှိခဲ့သည်။
လျှောက်လွှာများ ပလပ်စတစ်မှင်၊ သတ္တုမှင်၊ EMI စပယ်ယာကော်၊ လျှပ်ကူးကော်၊ ချက်ချင်းကော်၊ သွန်းလောင်းသည့်ကော်ကဲ့သို့သောအရည်ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးအတွက် ၁. သင့်လျော်သည်။ ဂလိုင်း၊ ငွေအကော်၊ အနီရောင်ကော်၊ အပူငါးပိ၊ မိုးခေါင်မှုကာကွယ်ခြင်းငါးပိ၊ ပွင့်လင်းသောဆေးသုတ်၊ ဝက်အူပြုပြင်ခြင်း၊ ပလပ်စတစ်၊ သစ်သား၊ စတစ်ကာစသည့်အမျိုးမျိုးသောကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများပေါ်တွင်အရည်ပစ္စည်းများကိုဖြန့်ဝေရန် 2.can ကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။
Weldo ၅ ရောင်စုံ PVC / Silicon တံဆိပ်အလိုအလျောက်သုတ်စက်စက်
ထူးခြားချက်များ: 1. JPG ဖိုင်ကိုဆော့ဝဲလ်များသို့တင်ပို့ခြင်း၊ ကွန်ပျူတာပရိုဂရမ်ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ဆော့ (ဖ်) ဝဲသည်ရှင်းလင်းစွာမြင်နိုင်ပြီးအဆင်ပြေပါသည်။ 3. တစ် ဦး တည်း nozzel သို့မဟုတ် multi nozzle ကိုအမှန်တကယ်ထုတ်လုပ်မှုအရအသုံးပြုနိုင်သည်။ ထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်စေရန်အတူတကွလုပ်ဆောင်နေသော Max5nozzles ။ ကွဲပြားသောပရိုဂရမ်းမင်းဖြတ်လမ်းခလုတ် ၈ ခုအထိသည်၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများစွာထုတ်လုပ်မှုအတွက်သင့်တော်သည်။ ၅။ ပရိုဂရမ်ကိုစီစဉ်ပြီးသည်နှင့်၎င်းကိုကွန်ပျူတာထဲတွင်သိမ်းဆည်းထားပြီးထာဝရတရားဝင်ဖြစ်သည်။ ထုတ်ကုန်ကိုနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မံထုတ်လုပ်ရန်လိုအပ်သည့်အခါဒုတိယပရိုဂရမ်မပါပဲပရိုဂရမ်ကိုတိုက်ရိုက်ခေါ်ဆိုနိုင်သည်။ မှိုအနေအထား function ကိုနှင့်အတူတစ်ပြိုင်နက်နှစ်ခုမှို 6.Dispensing ။ ရှုပ်ထွေးပြီးတန်ဖိုးမြင့် PVC နှင့် silicone ထုတ်ကုန်များနှင့်ကိုက်ညီပါ။ ၈။ အမြန်ထုတ်လုပ်မှုသည်စက်တစ်ခုသည်အလုပ်သမား ၃ ဦး မှ ၅ ဦး နှင့်ညီမျှသည်။ ၉။ PVC / silicone ထုတ်ကုန်များပြုလုပ်ထားပါ။ အရည်အသွေးမြင့်ပြီးချွတ်ယွင်းမှုနည်းသည် cost ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ 10. ဆော့ဖ်ဝဲနှင့်စက်လည်ပတ်မှုလွယ်ကူစွာသင်ယူနိုင်သည်။ training လေ့ကျင့်ရေးအချိန်ကိုတိုစေသည်။ 11.Programming နည်းလမ်း: အစက်, လိုင်း, arc ။
Weldo 12 အရောင်များရှိသော PVC / Silicon တံဆိပ်အလိုအလျောက်သုတ်စက်စက်
ထူးခြားချက်များ: 1. JP သို့မဟုတ် DXF ဖိုင်များကိုဆော့ဝဲလ်များသို့တင်ပို့ပြီး၊ ဖောက်သည်များအရကွန်ပျူတာဂရပ်ဖစ်ပရိုဂရမ်းမင်းရွေးချယ်ရန် (သို့) သင်ကြားရန်အကွက် (လွယ်ကူသော) ပရိုဂရမ်ကိုရွေးချယ်ရန်စိတ်ကျေနပ်မှုရှိသည်။ 3. တစ် ဦး တည်း nozzel သို့မဟုတ် multi nozzle ကိုအမှန်တကယ်ထုတ်လုပ်မှုအရအသုံးပြုနိုင်သည်။ ထုတ်လုပ်မှုတိုးတက်စေရန်အတူတကွလုပ်ဆောင်နေသော Max12 nozzles ။ ကွဲပြားသောပရိုဂရမ်းမင်းဖြတ်လမ်းခလုတ် ၈ ခုအထိသည်၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများစွာထုတ်လုပ်မှုအတွက်သင့်တော်သည်။ ၅။ ပရိုဂရမ်ကိုစီစဉ်ပြီးသည်နှင့်၎င်းကိုကွန်ပျူတာထဲတွင်သိမ်းဆည်းထားပြီးထာဝရတရားဝင်ဖြစ်သည်။ ထုတ်ကုန်ကိုနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မံထုတ်လုပ်ရန်လိုအပ်သည့်အခါဒုတိယပရိုဂရမ်မပါပဲပရိုဂရမ်ကိုတိုက်ရိုက်ခေါ်ဆိုနိုင်သည်။ မှိုအနေအထား function ကိုနှင့်အတူတစ်ပြိုင်နက်နှစ်ခုမှို 6.Dispensing ။ ရှုပ်ထွေးပြီးတန်ဖိုးမြင့် PVC နှင့် silicone ထုတ်ကုန်များနှင့်ကိုက်ညီပါ။ ၈။ အမြန်ထုတ်လုပ်မှုသည်စက်တစ်ခုသည်အလုပ်သမား ၃ ဦး မှ ၅ ဦး နှင့်ညီမျှသည်။ ၉။ PVC / silicone ထုတ်ကုန်များပြုလုပ်ထားပါ။ အရည်အသွေးမြင့်ပြီးချွတ်ယွင်းမှုနည်းသည် cost ကုန်ကျစရိတ်ကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ 10. စက်ရုပ်နှင့်ပေါင်းစည်း။ လုပ်အားကုန်ကျစရိတ်ကိုအလိုအလျှောက်လျှော့ချနိုင်သည့်အပြည့်အဝအလိုအလျောက်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းကိုဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။ ဆော့ဖ်ဝဲနှင့်စက်လည်ပတ်မှုလွယ်ကူစွာသင်ယူနိုင်သည်။ training လေ့ကျင့်ရေးအချိန်ကိုတိုစေနိုင်သည်။ 12.Programming နည်းလမ်း: အစက်, လိုင်း, arc ။
Weldo 18 အရောင်များရှိသော PVC / Silicon တံဆိပ်အလိုအလျောက်သုတ်စက်စက်
ကုန်ပစ္စည်းလျှောက်လွှာ 1.Gift ထုတ်ကုန် 2.Keychain, ဘားဖျာ, coaster, အိတ် tag, ကလောင်မောင်း, ဆီလီကွန်မိုဘိုင်း cae၊ silicone လက်ပတ်နာရီ၊ silicone လက်ကောက်ဝတ်၊ PVC မိုဘိုင်းဖုန်းကိုင်သူ၊ PVC ပုလင်းဖောက်တံ။ 4.zipper puller, ရာဘာတံဆိပ်၊ ဖိနပ်အထက်၊ ချိတ်နှင့်ကွင်းဆက်စွဲကပ်ထားသည် ၅။ ဖိနပ်များဖုံးအုပ်ထားခြင်း၊
ဖောက်သည်များစီးပွားရေးပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်တိုးမြှင့်ထုတ်လုပ်မှုထိရောက်မှုကိုအကောင်းဆုံးနှင့်ရေရှည်တည်တံ့ရေးရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်, အလိုအလျောက်စက်ယန္တရားများနှင့်ပစ္စည်းကိရိယာများထုတ်လုပ်မှုထိရောက်မှုနှင့်ထုတ်ကုန်တည်ငြိမ်မှုကိုတိုးမြှင့်, ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်ကိုပြောင်းလဲနှင့်အမြတ်တိုးမြှင့်ကူညီရန်အရည်အသွေးမြင့်ကော် dispensing ပစ္စည်းကိရိယာများ, ဆန်းသစ်နှင့်ကိုယ်ပိုင်နည်းပညာလျှောက်လွှာဖြေရှင်းချက်ပေးပါသည်။
WELDO အလိုအလျောက်စက်ပစ္စည်းသည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသုံးစွဲသူများအားစက်ပစ္စည်းနှင့် scara စက်ရုပ်အမျိုးအစားများကိုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်ကိုအီလက်ထရောနစ်၊ မော်တော်ကား၊ အိမ်သုံးပစ္စည်း၊ ဖိနပ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ စတစ်ကာများ၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်များ၊ ယိုပလပ်စတစ်များ၊ လက်သည်း၊ လက်ကိုင်ဖုန်းဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ မျက်မှန်များနှင့်အခြားနယ်ပယ်များတွင်ဖြစ်သည်။ ရေရှည်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွင်ဖောက်သည်များဖြစ်သော Midea, Huawei, Gree, Skyworth, Haier နှင့်အခြား Fortune 500 ကုမ္ပဏီများနှင့်အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများထုတ်လုပ်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။
မြင့်မားသောတောက်ပသော arc ထုတ်ကုန်များအတွက်မြန်နှုန်းမြင့်စက်
မြင့်မားသော brightness arc ထုတ်ကုန်များအတွက်မြန်နှုန်းမြင့်စက်
WELDO ကိုမတ်လ ၂၀၀၇ တွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။
WELDO သည်အရည်အတွက်ထိန်းချုပ်မှုအတွက်အလိုအလျောက်ထုတ်လုပ်သည့်ပစ္စည်းကိရိယာများအားသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းကိုအာရုံစိုက်သည့်နည်းပညာကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဥပမာ - အလိုအလျောက်ကော်ဆေးပေးခြင်း၊ ပလတ်စတစ်ဆေးသုတ်ခြင်း၊ အရောင်နှင့်ဆေးထိုးအဆို့ရှင်များ။ ထုတ်ပေးစက်နှင့် scara စက်ရုပ်များအပါအဝင်ကျွန်ုပ်တို့၏အဓိကအမျိုးအစား။
စက်မှုလုပ်ငန်း ဦး ဆောင်သောအသိဉာဏ်ရှိသောထုတ်လုပ်မှုနည်းပညာ၊ ကျွမ်းကျင်သော၊ ပြီးပြည့်စုံသော၊ အချိန်မီကြိုတင်ရောင်းချခြင်း၊ ရောင်းချခြင်း၊ ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်း၊